အိန္ဒြာ: Essential Art Is Natural Delightful Realistic Adventure
Essential Art Is Natural Delightful Realistic Adventure
1. What is your name : -
2. A four Letter Word : Epic
3. A boy's Name : Edgar Allan Pole
4. A girl's Name : Ella Wheeler Wilcox
5. An occupation : Epicure
7. Something you'll wear : Eye Glass
8. A food : Eclair
9. Something found in the bathroom : Elbow Pipe
11. A reason for being late : Exit lost
12. Something you'd shout : Escape soon
13. A movie title : Elderly Suicide
14. Something you drink : Erode
15. A musical group : Eagle
16. An animal : Eel
17. A street name : East Coast
18. A type of car : Eclipse
19. The title ofasong : Eight daysaweek
20. A verb : Echo
မမ မနော်ဟရီ ၊ လင်းဒီပ နဲ့ မိုးကုတ်သားတို့ မေးလို့ဖြေပါသည်..။
ဖြေပေးလို့ အရမ်း ဝမ်းသာပါ၏..
(အဘက အသက်ကြီးတော့ လိမ္မော်ရောင်စာလုံးတွေကို မနည်းမြင်အောင် ဖတ်ရတယ် ..ဟီး)
EAINDRA က Epicure လုပ်ငန်းမှာ Eight daysaweek အလုပ်လုပ်ပြီး Elbow Pipe တွေ စစ်ရလွန်းတော့ Eye Glass တွေပါ တပ်ထားရပြီ။ အလုပ်က ပြန်တိုင်း East Coast လမ်းမပေါ်မှာ Eclipse ကားလေးနဲ့ Edgar Allan Pole က ညနေတိုင်း လိုက်ပိုးတော့ Ella Wheeler Wilcox က မနာလို ဖြစ်ပီး Emerald ဆွဲကြိုးကြီးနဲ့ နဲ့ Elderly Suicide လုပ်သွားတာ၊ Eel တွေ Eagle တွေ ၀ိုင်းနေမှ သိကြရတယ်တဲ့။
အမအိမ်ကတော့ Eclairစားမပျက်၊ Erode သောက်ရင်း Epic ရုပ်ရှင်ကားကို ကြည့်ကောင်းတုန်း။ Europe ကိုလဲ အိပ်မက်တွေ မက်ကောင်းနေလိုက်ထာ Echo သံတွေတောင် တခေါခေါ ထွက်လို့။ အိပ်မက်ထဲမှာ Exit lost နေလို့ Escape soon လို့လဲ တဖွဖွ ယောင်နေသေးတယ်။
အခုလို တစ်ခုတ်တရ ရေးပေးတာ ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ဗျာ။ ပေါက်ကရတွေ လျှောက်မန့်သွားလို့ ဒေါပွနေမှာ မြင်သေး။။ အဟေးးဟေးးးးဟေးးးးးးးးးးးးးးး
ညက်ရည်တွေ ကျအောင် ပြူးပြဲဖတ်သွားတယ်အေ...E တွေကို လှပစွာ ရေးတယ်...ကြိုက်တယ်..
မိုက်လိုက်တာ မရယ် ...eaindra ကို ဖွဲ့သွားတာ ရှယ်ပဲ။ =)
E တွေ မွှန် နေပါလား။ ဟီး။
ကတ်သီးကတ်သပ် လှလှပပ တော်။